Ukuxinzezeleka kwengqondo kwihotele yakho ukuya kwi-Airport Basel - ukusuka kwi-40.- CHF
Sinikela ngenkonzo ekhethekileyo njengendwendwe yehotele kwisixeko sethu esihle saseBasel. Ngenkonzo yonkqonkqo ngexesha lokuhlala kwakho eBasel siqinisekisa ukuba unokugxila kwizinto eziyimfuneko-nokuba ngaba ukuhamba kwindawo yaseKapa yaseBasel, ukutyelela kwi-Kunstmuseum okanye kwintlanganiso yezoshishino.
Idluliselo lwenkonzo ngokuthe ngqo kwisango leedolophu okanye kwihotele
Ngokukhawuleza xa ufika eBasel kwisikhululo se-moya okanye kwisikhululo sesitimela, siya kuthatha uxinzelelo lwakho lokuhamba. Silindele wena kwisigxina sokufika kwaye sikhuphe uhambo lwakho ngokukunika umthwalo wakho ukuya kuthi sedan ukunceda. Ukusuka apho siya kukuhambisa kwihotele yakho okanye kwindawo yomcimbi. Kwakhona, umqhubi wakho uya kuvuyela ukuncedisa umthwalo wakho ukuya ehotele.
Ukukhululeka kwengqondo kwihotele yakho ukuya kwi-Airport yaseBasel
Ngokukhawuleza ukuba ufuna ukuphelisa ukuhlala kwakho eBasel uze uqhubekele kwisikhululo se-moya, uhlala kwindawo efanelekileyo Ukuthunyelwa kweBasel yeNkonzoWena kwakhona kumgangatho oqhelekileyo kunye nazo zonke izibonelelo ezikhoyo. Kwanele ukuba sikuxelele ngesicelo sakho sokudlulisa ngeyure ezayo nje phambi kokukhangela kwihotele. Kwaye ukuze ungakhathazeki malunga nokufumana imali eyaneleyo yamaphepha kwimali engasemzini kuwe, siyavuya ukukunika iintlawulo zekhadi lesikweletu.
Unokwenza lula ukubhuka kwakho kwi-Intanethi. Silindele ukuba uhambo lwenu lube luhle kwaye lukhuselekile.
Iqela lakho lenkonzo yokudlulisa esuka eBasel
Kuphawulwe: Basel moya Shuttle inkonzo yokuthuthwa
taxi.flughafen Matshi 9, 2017 Matshi 16, 2017 Basel, moya Shuttle, inkonzo yokuthuthwa Akukho gqabaza
← I-Shuttle ye-Airport yeZurich neBasel
I-BASELWORLD 2018 - Ikulungele ukuhamba ne-Transfer Service yaseBasel →